टिक टेक टू 🥇 Emulator.online बाट नि: शुल्कका लागि अनलाइन खेल्नुहोस्
टिक tac खुट्टाको औंलासम्म कसले कहिल्यै टिक-ट्याक-टू खेलेको छैन? यो सम्झन को लागी एक सबैभन्दा लोकप्रिय र मनोरन्जनात्मक शौक हो। सरल र छिटो हुनुको अलावा, यो खेल तपाइँको तर्क क्षमता लाई ठूलो बनाउन मद्दत गर्दछ।
टिक ट्याक टु: चरण-दर-चरण कसरी खेल्ने? 🙂
खेल्नु ब्लेक अनलाइन नि: शुल्क, मात्र यी चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् :
चरण 1 । तपाइँको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र खेल वेबसाइटमा जानुहोस् Emulator.online।
चरण2। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईले क्लिक गर्नु पर्छ प्ले र तपाइँ खेल्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, मेशिनको बिरूद्ध खेल्न रोज्नुहोस् वा साथीसँग खेल्नुहोस्। तपाई बोर्डमा हुनु पर्ने वर्ग संख्या पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
3 कदम। यहाँ केहि उपयोगी बटनहरू छन्। तिमी सक्छौ " आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् ", हिट" प्ले "बटन र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ" रोक्नुहोस् "र" फेरि शुरु गर्नु "कुनै पनि समयमा।
4 कदम। प्राप्त तपाईका तीनवटा टाइलहरू ठाडो, तेर्सो, वा विकर्ण लाइन गर्न।
त्यहाँ धेरै साइटहरू छन् टिक tac खुट्टाको औंलासम्म नि: शुल्क उपलब्ध। तपाईं एक रोबोट वा एक व्यक्ति संग खेल्न सक्नुहुन्छ। गुगलले पनि यो उपलब्ध गराउँदछ। छोटकरीमा, तपाईले प्लेटफर्ममा "टिक-ट्याक-टू" को लागी खोजी गर्नु पर्छ।
सबै भन्दा माथि, यो खेल anyone बर्षको उमेरबाट जो कोहीका लागि उपयुक्त छ।
टिक टेक टू भनेको के हो? 🤓
टिक tac खुट्टाको औंलासम्म नियमहरूको एक अत्यन्त साधारण खेल हो, जसले आफ्ना खेलाडीहरूलाई ठूलो कठिनाइहरू ल्याउँदैन र सजीलै सिकिन्छ। यसको उत्पत्ति अज्ञात छ, यो संकेतको साथ यो सुरु भएको हो कि यो प्राचीन मिस्रमा शुरू भएको थियो, जहाँ the, years०० वर्ष भन्दा पुरानो ढु of्गाबाट खोपिएका ट्रेहरू भेटिए।
खेलको उद्देश्य O वा तीन X को एक सीधा रेखामा राख्नु हो।
टिक टेक टूको इतिहास 😄
खेल लोकप्रिय भयो इङ्गल्याण्ड मा 19 सदी , जब महिला दिउँसो कुरा गर्न र कढ़ाई गर्न जम्मा भए। यद्यपि एल्डरहरू, किनकि उनीहरू कमजोर आँखाले गर्दा अब कढ़ाई गर्न सक्दैनन्, खेलबाट मनोरन्जन गरियो जुन नामाकरण गरिएको थियो। Noughts र क्रसहरू .
तर खेलको मूल धेरै पुरानो हो। मा उत्खनन Kurna मन्दिर मिश्रमा यसको १ the औँबाट सन्दर्भ भेटियो शताब्दी ई.पू. । तर अन्य पुरातात्विक खोजहरूले देखाउँदछ कि टिक ट्याक टू र अन्य धेरै यस्तै प्रकारका शल्यक्रियाहरू विकसित भएका थिए ग्रहको सबैभन्दा भिन्न क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र रूपमा : तिनीहरू पनि पुरानो चीन, कोलम्बिया पूर्व अमेरिका र रोमन साम्राज्य, मा अन्य खेलाइएको थियो।
1952 मा, ईडीएसएसी कम्प्युटर खेल OXO विकसित भएको थियो, जहाँ प्लेयरले टिक ट्याक टु खेलहरूमा कम्प्युटरलाई चुनौती दियो। यसैले समाचारहरू छन् जसको पहिलो भिडियो खेलहरू मध्ये एक उत्पन्न भयो।
टिक टेक टू नियमहरू 📏
बोर्ड एक हो तीन प row्क्ति द्वारा तीन स्तम्भ म्याट्रिक्स .
दुई खेलाडीहरू प्रत्येक एक मार्क छनौट गर्नुहोस्, प्राय: सर्कल (O) र एक क्रस (X)।
खेलाडीहरू वैकल्पिक रूपमा खेल्छन्, पालो प्रति एक चाल , बोर्डमा खाली स्थानमा।
यसको उद्देश्य छ तीन सर्कलहरू वा प three्क्तिमा तीन क्रसहरू पाउनुहोस् , या त तेर्सो, ठाडो वा विकर्ण, र एकै समयमा, जब सम्भव हुन्छ, अर्को चालमा विजयी हुन रोक्नुहोस्।
जब एक खेलाडी उद्देश्य प्राप्त गर्दछ, सबै तीन प्रतीक प्राय: पार गरीन्छ।
यदि दुबै खेलाडीहरू सँधै राम्रो खेल्छन् भने, खेल सँधै बराबरी हुन्छ।
खेलको तर्क धेरै सरल छ, त्यसैले सबै भन्दा राम्रो सम्भावनालाई कम गर्न वा याद गर्न यो गाह्रो छैन, यद्यपि सम्भावनाहरूको कुल संख्या धेरै ठूलो छ, प्राय जसो सममित छ र नियमहरू सरल छन्।
यस कारणका लागि, यो खेलको लागि ड्र (वा "बुढो हुनुहोस्") को लागी धेरै सामान्य छ।
विजेता : यदि तपाइँसँग प row्क्तिमा दुई टुक्रा छन् भने, तेस्रो राख्नुहोस्।
ब्लक : यदि विपक्षीसँग प a्क्तिमा दुई टुक्रा छन् भने, उसलाई रोक्न तेस्रो राख्नुहोस्।
त्रिकोण - एक अवसर सिर्जना गर्नुहोस् जहाँ तपाईं दुई तरिकामा जीत गर्न सक्नुहुन्छ।
विपक्षी त्रिकोण रोक्नुहोस्
केन्द्र : बीचमा खेल्नुहोस्।
खाली कुना - खाली कुनामा खेल।
कसरी जीत गर्ने बारे सुझावहरू
तार्किक सोच अभ्यास गर्न को लागी, यो शौक को केहि चालहरु छन् कि छोड्दा मद्दत।
१ - बोर्डको कुनामा प्रतीकहरू मध्ये एउटा राख्नुहोस्
मानौं कि कुनै एक खेलाडीले X कुनामा राख्यो। यो रणनीतिले विपक्षीलाई गल्ती गर्न प्रेरित गर्दछ, किनकि यदि उसले केन्द्रमा वा बोर्डको छेउमा एउटा ओ खाली स्थानमा राख्छ भने, त्यसले सम्भवतः हराउनेछ।
२ - विपक्षीलाई रोक्नुहोस्
जहाँसम्म, यदि विपक्षीले बीचमा O राख्छ भने, तपाईंले X लाई लाइनमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्दछ जुन यसको प्रतीकहरू बीच मात्र खाली ठाउँ हुन्छ। यसैले, तपाइँ विपक्षीलाई रोकिदै हुनुहुन्छ र तपाइँको जीतको लागि अधिक अवसरहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ।
- तपाईंको जीतको संभावना बढाउनुहोस्
तपाइँको जीतको सम्भावना बढाउन, यो तपाइँको प्रतीक बिभिन्न लाइनहरूमा राख्नु राम्रो विचार हुन्छ। यदि तपाइँले एक प row्क्तिमा दुई Xs राख्नु भयो भने, तपाइँको विपक्षीले तपाईंलाई याद गर्नेछ र तपाइँलाई रोकिनेछ। तर यदि तपाइँ अरू रेखामा तपाइँको एक्स फैलाउनु भयो, तपाइँ तपाइँको जीत को संभावना बढाउन।
मानव टिक टेक टू कसरी गर्ने?
बोर्ड जम्मा गर्नुहोस्
खेल्नको लागि खुला, समतल स्थान छनौट गर्नुहोस्। अर्को, हुला हुप्सलाई तीन पows्क्ति र तीन पows्क्तिहरूमा वितरण गर्नुहोस्, जस्तै कागज टिक-टक-टू खेल बोर्ड। हुला हुप्सको बिच धेरै ठाउँ नछोड्नुहोस्।
यदि तपाईं हार्ड फ्लोरका साथ घर भित्र खेल्दै हुनुहुन्छ भने, बोर्ड बनाउन टेप प्रयोग गर्नुहोस् । कंक्रीटमा, तपाईं चाकको साथ लाइनहरू पनि तान्न सक्नुहुनेछ।
ताकि खेलको समयमा कसैलाई चोट नपुर्‍याओस्, प्वालहरू, खतरनाक मलबे (जस्तै भाँचिएको गिलास), वा जरा र ढु stones्गाहरूको रूपमा केहि अन्य प्रकारको जोखिमको लागि मैदानमा हेर्नुहोस्।
एक भन्दा बढि बोर्ड स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग खेलाडीहरूको ठूलो संख्या छ। आदर्श रूपमा, प्रत्येक टीमको एक र तीन सहभागीहरू हुनुपर्दछ।
टोलीहरू अलग गर्नुहोस्
मानव टिक-टेक-टू खेल व्यक्तिगत रूपमा वा टीमहरूमा खेल्न सकिन्छ। दोस्रो केसमा प्रत्येक टोलीसँग अधिकतम तीन सदस्य हुनुपर्दछ। प्रत्येक बोर्डसँग प्रतिस्पर्धा दुई टीम हुनुपर्दछ, प्रत्येक पक्षमा एक।
तपाईले तीन भन्दा बढि खेलाडीहरुका साथ टोलीलाई पनि अनुमति दिन सक्नुहुन्छ, तर यसले खेललाई ढिला बनाउँनेछ र कान्छो खेलाडीहरुलाई बोरि .मा पुग्न सक्छ।
सुरु गर्न टोली छनौट गर्नुहोस्
सिक्का वा सिक्काको साथ पहिलो कदम चाल्ने छनौट गर्नुहोस्। अर्को विकल्प भनेको प्रत्येक टोलीलाई एक नेता लिन को लागी सोध्नु हो, जो चट्टान, कागज, र कैंचीको साथ शुरू हुनेछ। खेल्ने पहिलो टीमले एक्स प्राप्त गर्नेछ, दोस्रो टीमले ओ पाउनेछ।
खेललाई अझ व्यस्त बनाउनको लागि खेलाडीहरूलाई राउन्ड ट्रिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न र विजेताको लागि पहिलो कदम चाल्न अनुरोध गर्नुहोस्।
एक टीमले प in्क्तिमा तीन वर्ग भर्न सक्ने समयसम्म खेलिरहनुहोस्। प्रत्येक टोलीलाई चार कपडा झोला दिनुहोस्। O बाट X लाई भिन्न पार्न फरक र colored्गको ब्याग प्रयोग गर्नुहोस्। प्रत्येक टोलीले एउटा झोला एक पटकमा बोर्डमा राख्नुपर्दछ जबसम्म ती मध्ये एक मध्ये एक जीत हुँदैन वा खेल ड्र हुँदैन। यदि टोलीसँग एक भन्दा बढी सहभागीहरू छन् भने, प्रत्येक टीमको एक सदस्यलाई उहि समयमा खेल्न भन।
खेल फेरि सुरु गर्न बोर्डबाट झोलाहरू हटाउनुहोस्। ताकि सहभागीहरू जहिले पनि उस्तै टोलीहरूमा खेल्न थकित हुँदैनन्, तिनीहरूलाई एक अर्कासँग अदला-बदली गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।